हङकङ नेपाली महासंघको नवौँ महाधिबेशन सम्पन्न – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:३२ English
हङकङ नेपाली महासंघको नवौँ महाधिबेशन सम्पन्न
भरत लामा, हङकङ । यहि ०२ अगस्ट २०१५ का दिन हङकङ काउलुन स्थित पाकिस्तान क्लबको हलमा हङकङ नेपाली महासंघले नवौ महाधिबेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।
खुल्ला सत्रमा बिबिध व्यक्तिहरुलाई बिशेष अतिथि निम्त्याएको थियो भने प्रमुख अतिथि गैर आवासिय नेपाली संघ हङकङका नव निर्बाचित अध्यक्ष ललित लिम्बु रहेका थिए ।
बिशेष अतिथिहरुमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमल पौडयाल, नेपाली आदिबासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष एम । बि. थापा हङकङ नेपाली महासंघको प्रमुख सल्लाहकार हेम लिम्बु , कानुनी सल्लहाकार दासु राम पराजुली, सल्लाहकार हेजेन राई, सल्लहाकार हर्क राना, सल्लहाकार अर्चन गुरुङ, नेपालि महिला संघ हङकङकि अध्यक्ष टिका गुरुङ, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि हङकङका अध्यक्ष भक्त गुरुङ, नेकपा एमावोबादी हङकङ शाखा अध्यक्ष रबिन लिङ्ग्दॆन, नेपालि जनसम्पर्क समिति हङकङका अध्यक्ष बसन्त श्रीनेत् , संघिय समाजबादी पार्टी हङकङका सदस्य सचिब किसन राई रहेका थिए ।
हङकङमा बिधमान क्षेत्रीय, जातिय, खेलकुद । सास्कृतिक क्षेत्रका ३२ वटा नेपालि संघ सस्थाहरुको छाता संगठन हङकङ नेपाली महासंघका स्थापना सन् १९९८ मा भएको हो ।खुल्ला सत्रमा पानसमा दिप प्रज्वलन गर्न कार्यक्रमका सभापति तथा बिशेष अतिथिहरु अग्रसर भई कार्यक्रमको उदघाटन गरेका थिए। महासंघमा आबद्द संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई मंचको अघिल्लो पंक्तिमा वोलाई आशन ग्रहण गराइएको थियो भने उद्घाटन पश्यात नेपालको राष्ट्रिय गान बजाइएको थियो ।
प्रमुख अतिथि , बिशेष अथितिहरुले महाधिबेशन सफलताको शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गर्दै आगामी नया कार्य समिति सक्षम र सबल होस् भनि शुभेच्क्षा प्रकट गरेका थिए । खुल्ला सत्रमा नेपालको भुकम्प पिडितहरुलाई उल्लेख्य आर्थिक सहयोग गर्ने संघ सस्था, ब्यबसायी र कम्पनि संचालक तथा व्यक्तिहरुलाई खादा ओडाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो । खुल्ला सत्र सभालाइ हङकङ नेपाली महासंघका अध्यक्ष प्रदीप थापाले सभापतित्व गरेका थिए भने, स्वागत मन्तब्य उपाध्यक्ष रिता गुरुङले ब्यक्त गरेका थिए , कार्यक्रम संचालन सचिब मोति चामलिंगले गरेका थिए ।
अध्यक्ष प्रदीप थापाको खुल्ला सत्र समापन घोषणा संगै बर्तमान कार्यसमिति भंग भएको जानकारी दिदै तिन सदस्यीय बन्द सत्रका अध्यक्ष मण्डल समेत घोषणा गरेका थिए । बन्द सत्र अध्यक्ष मण्डलमा अध्यक्ष हेजेन राई, सदस्य द्वय हेम लिम्बु र बसन्त श्रीनेत रहेका थिए । अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रिता गुरुङ र छत्र बहादुर लिम्बु थिए । उपाध्यक्ष, महासचिब र सचिब निर्बिरोध भए । अध्यक्षमा ३६ मत प्राप्त गरि रिता गुरुङ बिजयी भईन भने प्रतिद्वन्दी छत्र बहादुर सुब्बाले १९ मत प्राप्त गरे एक मत बदर गरिएको थियो । निर्बिरोध निर्बाचित उपाध्यक्ष टंक राना, महासचिब मोति चामलिंग, सचिब सुमन थापा मगर भए । कोषाध्यक्षको पद निकट भविष्यमा महासंघको बैठकले मनोनयन गर्ने र संघिय परिषद्को बैठकमा अनुमोदन गर्ने गरि थाती राखेको छ।
महाधिबेशनको पूर्व सन्ध्यामा संस्थापन पक्षको बिरुद्द हर रात प्रहर आकस्मित बैठक र गठबन्धनहरु सम्पन भएको खबरहरुले हङकङ नेपालि महासंघको महाधिबेशन सरगर्मी बढेको थियो। अनेक प्रयास बाबजुद पनि संस्थान पक्षका अध्यक्ष प्रत्यासी रिता गुरुङ अत्याधिक बहुमतले बिजयी भईन भने निबर्तमान सचिब मोति चामलिंगले निर्बिरोध महासचिवको ताज पहिरे । यसबाट देखिएको बिस्लेशण अध्यक्ष प्रदीप थापाको ब्यबस्थापन अत्यन्तै कुटिल तथा कुशल थियो भन्ने अडकलबाजी भएको देखिन्छ ।
१९ श्रावण २०७२, मंगलवार २१:०७ मा प्रकाशित